Nezvedu - Yixing Guta Jitai Electronics Co, Ltd.
Jitai's Hunhu Kudzora Maitiro
Kubva pakuiswa kwezvinhu zvakagadzirwa kusvika panguva iyo zvigadzirwa zvedu zvasvika mumaoko evatengi vedu, Jitai inoshandisa inopindirana system yehuvimbiso hwehunhu uye nzira dzekutonga mhando dzinoona zvigadzirwa zvedu zvichizadzisa zviyero zvakaomarara zveiyo hermetic package indasitiri.
Kuburitsa Kwezvinhu Zvakagadzirwa
Kuongorora Kwezvinhu Zvakagadzirwa
Simbiso yehutano inotanga zvisati zvagadzirwa mbishi. Padanho rekugashira sampling nzira, zvishandiso zvinosarudzika zvakasarudzika kuti zviongororwe zvemhando yepamusoro (mushure meizvozvo danho rinoitwa pamusoro pekutakura zvinhu zvacho), kana sarudzo yakadaro ikaitwa kutakura kwese kwobva kwacheneswa, kuongororwa kuzere kunoitwa, kuderera kusakwana inokwenenzverwa uye kupukutwa, uye stock inobva yaunganidzwa.
Gungano uye Brazing
Pedzisa Kutarisa Kuongorora uye Kutanga Hermeticity Bvunzo
Kuteedzera kwekutanga gungano uye masitepisi ekushongedza, chigadzirwa chimwe nechimwe chinovhenekwa chega chega chekutarisa chinoteverwa neyekutanga hermeticity bvunzo.
Bemhapemha bonding dhigirii kuongorora.
Yakagadziriswa chigadzirwa kuongorora
Yakazara chigadzirwa kuongorora kunoongorora kuongorora kwechitarisiko, kuvaka, kuenzana kwekukora, uye yechipiri helium tracer gasi hermeticity bvunzo.
Pin kuneta bvunzo, munyu pfapfaidzo ngura kuramba bvunzo uye mamiriro ekunze simulation michina inoedza chigadzirwa kuita
Zvese zvigadzirwa zvigadzirwa zvega zvega-zvakaputirwa ne deoxidizing desiccant yekuisa, ndokuzoputirwa mune yakaturikidzana ye bubble kuputira. Uku kuedza kunovimbisa kuti chega chega Jitai chakaunzwa kwauri ndechemhando yepamusoro sepaya payakasiya mufekitori.